တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi Baharim ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA တို့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း) » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
မတ် ၁၈၊ ၂၀၂၀ မတ် ၁၈၊ ၂၀၂၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ မလေးရှားနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Zahairi Baharim ၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA တို့အားလကျခံတှဆေုံ့